Inani amakhadi, ukubhula - yinto ubelokhu abantu abanentshisekelo sithambekele nezimfihlakalo. Ngo-1960, i-West wathola amakhadi Tarot. Ikakhulukazi baye yaba undab 'uzekwayo hippie, nomdlandla wesayensi imfihlo. Inani Tarot nokubhula, okwakukhona ngaleso sikhathi udumile, baba lezi intsha ukuphatha "isihluthulelo" ulwazi ngezinto ezingokomoya lezizwe lasendulo.
Namuhla emphemeni equkethe amakhadi 78. Izithombe on babo ijikelezwe esiqondisweni owodwa othile. Yingakho "nabokhulumile" noma isikhundla "oqondile", ngakho-ke injongo okubhula nge ukubhula - kuba izinto ezahlukene Izincazelo ezahlukene.
ngokucacile kakhulu, lo mthetho ubizwa baphawula phezu amakhadi 22 ezakha okuthiwa "Major Arcana". elinye igama labo - Elikhulu Arcana. Igama lesiLatini elisho "kahle ngesihibe" kusho "imfihlo".
Endulo abantu babekholelwa ukuthi lamakhadi 22 zinamandla okukhulu. Izithombe kulezi izimpawu ezahlukene eziyinkimbinkimbi. Ngokwe ababikezeli benhlanhla ezinkulu Arcana uyambula izimfihlakalo ezifihliwe isiphetho sonke isintu.
Okushiwo amakhadi Tarot nge ukubhula isikhathi eside wahlala ukhiye kunoma isiphi isimo. Ukwehlukahluka kwezimangaliso inhlanganisela ikhadi lwesigameko unikezwa, bamdela ngoba ukuceba esisuka. Oluhambisana umcabango enembile kwaholela nemiphumela emangalisayo.
Nababhuli ihlaziye esidlule, silangazelele ikusasa, futhi ngezinye izikhathi ngisho esakhiwe umfuziselo isimo esizayo amaklayenti abo.
Asele amakhadi 56 Imininingwane Tarot emphemeni zihlukaniswe imibala eziningana - esiliva, maces, izinkemba kanye nezinkomishi. (Kwakumelwe okhokho amakhadi yesimanje: amakilabhu yaphenduka amakilabhu, izinkemba - e abakuthola, uhlamvu lwemali - ngamathamborini izinkomishi - e izimpethu.)
Amasudi ezine Tarot ndawonye kwakha "Minor Arcana". Ngo ngayinye lamakhadi umugqa abakhona amanani kusuka 1 kuya 10 kanye amakhadi ezine ngezithombe, elisho ukushiyana kwezidalwa (phezulu): isithunywa kuqala, bese - umgibeli eminye - Sibyl noFaro. (Nalapha futhi, kungaba kuhambisana yesimanje emphemeni kuyofikwa: - intokazi, futhi uFaro - isithunywa umgibeli steel earphone, Sibyl King).
S abaphezulu junior Arcana - inani amakhadi Tarot nge ukubhula
Ngesinye isikhathi, ukubhula kwenzeka ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa kokubili Arcana abadala. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, kwaba khona ngokuhlukana eyisisekelo lezi Arcana. Senior lase lithengwe bezinkanyezi professional, kanti uthumbu kwaba ukuthandwa ukuthola phakathi kwezicukuthwane.
Meaning of amakhadi Tarot nge ukubhula siyahluka ngaso sonke isikhathi futhi kuncike umehluko wemisindo nemiqondo yamagama amaningi: ukubeka eyodwa noma elinye ikhadi, lapho isiqondiso "bheka" nokunye. Ngokuthakazelisayo, ezinye izazi-mlando wanika Taro ukubaluleka siqu. Ngokusho kwabo, lezi amabalazwe abonisa imodeli zedivayisi zithi Ancient Egypt naseNdiya. Njengoba umphakathi kula mazwe akuvunyelwe ihlukaniswe castes, kanye amasudi ezine Tarot simele ngokuqondile kwezakhi nomphakathi:
abalimi kanye netingcweti temsebenti;
abahwebi kanye bezimali;
Phakathi naleso sikhathi, abantu basendulo ngokwabo ngokuhunyushwa suit lamakhadi njengoba izakhi ezine: indebe - kuba amanzi, inkemba - lena kwemibani Mace - ilangabi (umlilo), kanye uhlamvu lwemali - ezweni.
Namuhla, ukubaluleka lapho bedlala amaphepha inhlanhla Yiqiniso, akuyona kangaka futhi kwesibhamu. Noma kunjalo, abaningi bakholelwa ikhono eliyingqayizivele izithombe, evela ezikhathini zasendulo.
Iskriphthi "isikhathi eside impela eLeningrad". "Diaries kweLeningrad ovinjezelwe". "Ukuvinjelwa Isinkwa Leningrad"